U disk ma furi karo qaabeynta deg degga ah, sida loo soo celiyo xogta? - [How to recover by 3 step]
Your location:Data recovery software>>so>U disk ma furi karo qaabeynta deg degga ah, sida loo soo celiyo xogta?
Maxaan sameeyaa haddii USB-ga USB-ga uu ku guuldareysto inuu furo oo isla markiiba qaabeeyo? Sidee loo soo ceshan karaa xogta ku jirta U diskka? Dhibaatada qaabaynta marka USB-ga USB-ga aan la furi karin waa mid iska caadi ah maanta. Waxaan maanta ka wada hadli doonaa sida saxda ah ee loo maareeyo dhibaatada USB flash drive-ka. Maxaan sameeyaa haddii USB-ada USB-ka aysan furi karin isla markaana qaabayn degdeg ah sameyn karin? Adeegsiga kaydinta xogta ayaa inta badan loo adeegsadaa qalabka kaydinta xogta, inta badan adeegsadayaasha inta badan isticmaala diskka U ayaa la kulmay dhibaatadan: U disk si lama filaan ah uma furi karo oo waxay dardar gelinaysaa in aan loo samaysan, sida " Waxaad ubaahantahay inaad sameysatid diskiga kumbuyutarka kahor intaadan isticmaalin. Ma rabtaa inaad qaabeyso? "" Diskiga kujira G G lamaha. Ma dooneysaa inaad hada qaabeyso? ". Waxaan aaminsanahay in adeegsadayaal badan ay yeelan doonaan madax xanuun dhibaatadan, sababta oo ah waxay badanaa keenaysaa in qaabka loo sameeyay 'disk disk' uu keydinayo xog muhiim ah. Marka, maxaan sameeyaa haddii USB-ada USB-ku furan kari weydo oo ay dardar gelinayso in la beddelo qaabka? Xaaladdan oo kale, xogtii ku jirtay USB flash drive-ka dib ma loo soo celin karaa? Marka U disk-ka uusan furi kareynin qaab-dhismeedka, marka hore is-deji oo adiga cafint riix argagax Badhanka "Qaabka Disk" badhanka, samee qaliinka qaabka diskiga ah. Habka saxda ah waa in si toos ah loo xiro daaqadda qaabeynta isla markiiba, ka dibna isticmaal habka dib u soo kabashada xogta si loogu soo celiyo faylasha kujira diskka isla markiiba. Tan waxaa ugu wacan howlgalka qaabdhismeedka 'disk disk U' saameyn kuma yeelan doonto soo kabashada xogta, mararka qaarna waxay saameyn ku yeelan doontaa saameynta soo kabashada. diskiga U disk ma furi karo sababao badan oo ah qaabaynta
U disk ma furi karo tillaabooyin looma sameysan karo sababa badan, waxaa laga yaabaa inay noqoto guuldarro macquul ah, Waxa kale oo jiri kara dhaawac jir ahaaneed. Halkan waxaa ku yaal sababaha caadiga ah:
Khasaare qaybsi, sida khaladaadka nidaamka feylasha, ayaa sababa qaybaha RAW. Markaad isticmaaleysid USB flash drive, wax qabadyo aan caadi aheyn, sida si xor ah u xirashada kombiyuutarka 'USB flash drive' kombiyuutarka, ha u isticmaalin habka tirtirka badbaadsan. Burburinta fayraska. Ka dib marka diskiga U uu ku dhaco fayras, xaalado badan ayaa sababi doona in diskka U uu noqdo mid aan la aqrin karin. Adeegsiga waaxyo xunxun oo ku jirta diskka 'disk' waxay sidoo kale sababi kartaa luminta xogaha sida diskka 'U disk' uusan awoodin inuu furo. Nidaamka hawlgalka oo fashilmay. Cilad-jiid jireed ayaa ka dhacday U disk-ga, tusaale ahaan, chip xusuusta iyo chip koontaroolka ugu weyn ayaa waxyeello gaadhay. Macallin qoraalka qoraalka ah: U disk lama furi karo isaga oo ka jawaabaya xogta ka dib qaabaynta? Xaqiiqdii, soo kabashada xogta U disk ma aha mid dhib badan.Waxa isticmaaleyaasha kombiyuutarka caadiga ah si fudud ayey ula soo bixi karaan xogta kombuyuutarka 'disk disk' iyagoo adeegsanaya barnaamijyada soo kabashada xogta. Software soo kabashada xogta waa fududahay in la shaqeeyo oo xoog badan, oo waxay leedahay saameyn soo kabasho oo wanaagsan kiiska halkaas oo diskka U uusan furi karin oo wuxuu dardar gelinayaa qaab-sameynta. Ilaa inta U diskku uusan lahayn cilad culus oo xagga qalabka ah, waxaad u adeegsan kartaa soo kabashada xogta si aad uga bogsato. Ka dib marka xogta ku jirta diskka dib loo soo celiyo, isticmaaleha ayaa qaab u sameyn kara diskka disk-ga. Lama awoodo in la furi karo disk-ga U formatted ah oo lagu xiray kombiyuutarka, waxyaabaha soo socdaa waa habka dib u soo kabashada xogta U disk. Tallaabada 1: Rakibo oo socodsiiso barnaamijyada soo kabashada xogta. Ku rakib barnaamijyada qaybinta kombuyuutarka ee aan u baahnayn inuu soo ceshado xogta.Kadib markii la rakibo dhammaado, dhagsii badhanka "Dhamaad". Talaabada 2: Xulo habka kabashada xogta on interface ugu weyn ee soo kabashada xogta. Software-ka wuxuu bixiyaa 4 howlo soo kabasho, kaasoo wax ka qaban kara afarta nooc ee dhibaatooyinka luminta macluumaadka, sida soo kabashada tirtirka, furitaanka furitaanka, qeybinta luminta, dib u qeybsiga, iwm. Dhibaatada ah in disk diskka U-fur aan la furi karin, waxaad dooran kartaa inaad soo celiso feylasha qeybta. Tallaabada 3: Raadi oo xulo diskka oo leh xog lumay, ka dib riix batoonka "Next" si aad ugu oggolaatid softiweerka Samee heerka iskaanka. Tijaabada afaraad: Falanqeynta iyo soo celinta xogta. Ka dib markii aad iskaan sahamiso natiijooyinka, waad u sii fiirin kartaa faylalka, waad arki kartaa haddii faylasha aad u baahatay la helay, oo hubi in faylasha si caadi ah loo soo ceshan karo. Ugu dambeyntiina, waxaad ubaahantahay inaad nuqul ka sameyso feylasha si aad u dhameystirto nidaamka soo kabashada: calaamadi feylasha aad rabto inaad ka soo kabato, ka dibna riix batoonka "Soo Noqo"; raac barnaamijka softiweerka ah inaad kumbuyuutar geyso kombuyuutarka si aad u keydisid feylasha la soo celiyay. Taasi waa. diskiga U furi maayo qaab dhakhso ah oo qaabaynta soo kabashada
Kadib markii aad ogaatay in U disk-ka aan la heli karin, indho la’aan uma qaabilikartid U disk-ga ama ma sameyn kartid hawlgallada chkdsk iyadoo loo eegayo hababka qaarkood ee shabakadda. Markaad dooraneyso softiweerka soo-kabashada, waa inaad isku daydaa inaad doorato barnaamij kumbuyuutar kabitaan ah oo xog-uruurin ah; Ka fikir iibsashada iyo diiwaangelinta mar labaad;
Maadaama ay soo kabashada xogtu aysan ahayn teknolojiyad wax lagu awoodo, waxaa jira xaalado aysan suuragal ahayn in 100% lagu badbaadiyo dib u soo kabashada, sida bixinta xogta. Sidaa darteed, qaar ka mid ah macluumaadka muhiimka ah waa in dib loo soo celiyo waqtiga, haddii ay dhacdo. Kor ku xusan ayaa ah habka dib u soo kabashada xogta ee U disk aan furin qaab dhismeedka, si fudud waad u beddeli kartaa U ilaa inta aad raacdo habka kor ku xusan. Xogta ku jirta diskka ayaa dib loo soo celiyay. Marka xogta dib loo soo celiyo, waad u qaabaysan kartaa U diskka, si aad u isticmaali karto U disk-ga si aad ugu keydiso xogta si farxad leh
PreSoo kabashada xogta kaydinta kombiyuutarka
NextMaxaan sameeyaa haddii drive USB-ka aan la furi karin? Sidee dib loogu soo ceshadaa xogta diskiga U?